Ndị na-eme njem nlegharị anya Tanzania ugbu a na minista na-ahụ maka ego adịghị mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ndị na-eme njem nlegharị anya Tanzania ugbu a na minista na-ahụ maka ego adịghị mma
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Mbelata mmefu njem nlegharị anya Tanzania
Mbelata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde $ 40 nke gọọmentị Tanzania kenyere iji belata mmetụta nke ọrịa COVID-19 na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya ekewala ndị isi ihe na mpaghara ndị kacha mkpa itinye ego.
Ego a bụ akụkụ nke mbinye ego nde $567.25 nke International Monetary Fund (IMF) kwadoro.
Emebere mbinye ego a iji kwado mbọ ndị ọchịchị Tanzania na-agbasi mbọ ike n'ịzaghachi ọrịa a site n'ịgbasa nsogbu ahụike, ọdịmma mmadụ na akụ na ụba ngwa ngwa.
Ọrụ gụnyere nrụgharị akụrụngwa, ntinye nke sistemu nchekwa, na ịzụrụ ngwa nyocha COVID mkpanaka.
Ebe Ministry of Natural Resources and Tourism kenyere otu ọdụm nke ngwugwu nde $ 39.2 nke gọọmentị etiti weputara iji kwado mgbake ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ijeri dollar ijeri iji rụkwaa ike ma nweta akụrụngwa dị nro ọhụrụ, ndị egwuregwu onwe ha mehiere. gagharịa, na-ekwu na ọ gaghị arụpụta ihe a tụrụ anya ya.
N'abalị abụọ gara aga, Minista na-ahụ maka akụ na ụba na njem nlegharị anya, Dr. Damas Ndumbaro, wepụtara nkwupụta na-akọwapụta ọtụtụ ọrụ ebe a ga-etinye ego ahụ na nkwenye iji mee ka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na-akpaghasị anya. Oria ojoo COVID-19.
Dr. Ndumbaro kwuru na oru a ga-emejuputa atumatu gụnyere nrụgharị akụrụngwa, ntinye nke sistemu nchekwa, na ịzụrụ ngwa nyocha ekwentị maka ịnwale ọrịa COVID-19 n'etiti ndị njem nlegharị anya.
N'ikwu ya n'ụzọ ziri ezi, Minista ahụ kwuru na a ga-eji nnukwu ego na-arụzigharị okporo ụzọ nwere njikọ 4,881 na-eduga na n'ime ogige ntụrụndụ mba ndị dị na Serengeti, Katavi, Mkomazi, Tarangire, Nyerere, Kilimanjaro, Saadani, na Gombe yana Mpaghara nchekwa Ngorongoro.
Ngwugwu a ga-agakwa ịkwado ụlọ ọrụ gọọmentị Tanzania Forests Services Agency (TFSA) na Tanzania Wildlife Management Authority (TAWA) n'ime oke ọhịa na nchekwa anụ ọhịa ha.
Ministri ahụ na-ezube itinye ego buru ibu iji nweta akụrụngwa njem njem metụtara njem, isi n'ime ha ga-abụ ụgbọ mmiri nwere enyo mara mma iji gboo njem ụgbọ mmiri Indian nke ga-ebuga na Kilwa Island iji nye ndị njem nlegharị anya enweghị nkebi. Osisi n'okpuru mmiri na anụ ọhịa si n'ime ụgbọ mmiri ahụ.
"Ọrụ ndị a ga-eme ka ọ dị mfe ịnweta ebe ndị njem nlegharị anya dị iche iche, na-ebupụta ngwaahịa ọhụrụ nke njem nlegharị anya iji mee ka ọrụ njem dị iche iche weghara ahịa ndị njem nlegharị anya na-apụta, ma mesịa mee ka ụlọ ọrụ njem na-eme njem," ka Dr. Ndumbaro kwuru na nkwupụta.
Agbanyeghị, ndị isi egwuregwu na njem nlegharị anya akwadoghị mmefu ego a chọrọ iji kwado mgbake ụlọ ọrụ na akụrụngwa siri ike na nke dị nro, na-ekwu na gọọmentị kwesịrị iji ha dị ka ngwugwu ihe mkpali iji nweta mgbake ngwa ngwa na ịlaghachi na itinye ego ozugbo.
The Tù Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Njegharị na Tanzania (TATO) ihe karịrị pasentị 80 nke òkè ahịa nke azụmahịa njem nlegharị anya na Tanzania na-ekwu na ekwesịrị iji ego ahụ kwado mgbake nke ụlọ ọrụ ahụ tumadi site na ngalaba nkeonwe yana n'ụzọ kachasị kwesị ekwesị, nke na nloghachi ga-akpali akụkụ ndị ọzọ na uru na uru. ụdọ ọkọnọ.
N'ihi ya, nke a ga-eweghachi ọtụtụ puku ọrụ furu efu ma nweta ego maka akụ na ụba, TATO kwuru na nkwupụta.
"Ekwesịrị inye ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ nkeonwe ka ha nweta nhazigharị mgbazinye ego na ogologo oge dị ala ọmụrụ nwa kpọmkwem maka mgbake ma ọ bụghị maka ntinye ego ọhụrụ," na-agụ nkwupụta TATO nke onye isi oche ya, Mr. Willbard Chambulo bịanyere aka na ya.
TATO tụpụtara na akụkụ nke ego kwesịrị ibelata VAT na njem nlegharị anya, nwetakwu ego nye ụlọ ọrụ na-ere ahịa steeti, Tanzania Tourists Board (TTB), iji nwee ike ịkwalite ebe a na-aga nke ọma iji mee ka ụlọ ọrụ dị oke egwu na-aga n'ihu. nke asọmpi cutthroat n'etiti ndị ọgbọ.
Nkwupụta TATO na-agụ, "Anyị nwere obi ụtọ na ngwugwu gọọmentị anyị kwupụtara maka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya, na-eche na nke ahụ bụ oge gbara n'aka maka ụlọ ọrụ nwere nsogbu, n'ihi na ọ ga-eme ka mgbake dị ngwa, mana ọ dị nwute na nke a agaghị eme."
TATO tụrụ aro na ego ahụ kwesịrị ịgụnye isi ego na-arụ ọrụ ma ọ bụ mbinye ego nwere ọmụrụ nwa dị ala n'aka ndị ọrụ nlegharị anya siri ike na ndị ọzọ metụtara ịmaliteghachi azụmaahịa ebe ụlọ akụ anaghị enye ha ọbụna kredit karịrị akarị.
"Inye ọmụrụ nwa dị ala na isi ego na-arụ ọrụ ogologo oge ma ọ bụ mbinye ego maka ndị njem na ndị njem nlegharị anya ga-enyere ha aka ịrụ ọrụ dị ugbu a na itinye ego na mpaghara atụmatụ dị mkpa iji mee ka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ngwa ngwa karịa ka akụrụngwa ga-eme," onye isi TATO rụrụ ụka.
Onye isi oche TATO Mr. Chambulo kwuru na Onye isi ala Samia Suluhu Hassan na-ekwu na Ministri na ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya ga-anọdụkọ ọnụ ma kwenye na mpaghara ndị dị mkpa iji tinye ego iji kpalie ụlọ ọrụ ahụ na ndụ.
"Ihe m chetara, Madam President Samia Suluhu Hassan gwara anyị ụlọ ọrụ nzuzo mgbe m nọ na New York, na mụ onwe m nọ ebe ahụ ka mụ na ndị ozi anyị nọrọ na-ekwurịta banyere mmefu nke ego ndị a, ma ọ tụrụ anyị n'anya, naanị anyị gụrụ n'akwụkwọ akụkọ otú e ekenyela ego,” ka Mr. Chambulo kwuru.
Tupu ntiwapụ nke coronavirus, data Bank of Tanzania (BoT) na-egosi na njem nlegharị anya na 2019 dọtara ndị njem nlegharị anya nde 1.5 na-enweta akụ na ụba $ 2.6 ijeri na nke mbụ, na-aghọ ndị isi na-akpata ego mba ofesi.
N'afọ 2020, akụkọ ụlọ akụ ụwa kachasị ọhụrụ na-egosi, njem nlegharị anya dara pasentị 72, n'ihi mmetụta ọjọọ nke ọrịa COVID-19, na-akpata mmechi nnukwu azụmahịa ma na-akpata ụgwọ ọrụ na-enwetụbeghị ụdị ya.
"Dịka anyị na-ekwu ugbu a, puku kwuru puku ndị ọrụ ka nọ n'ụlọ, ebe anyị na-agbasi mbọ ike iji aka efu maliteghachi ụlọ ọrụ ahụ. Anyị nwere ego mgbazinye ụlọ akụ na ọmụrụ nwa na-achịkọta ọnụ. Dị ka a ga-asị na nke ahụ ezubeghị, ọ nweghị ụlọ akụ nwere mmasị inye anyị kredit ọzọ; ọ fọrọ nke nta ka anyị hapụ ịnwụ,” ka o kwuru.
"Dịka onye isi oche TATO, achọrọ m ikele Madam President Hassan maka ịchekwa ego na itinye $ 39.2 nde maka njem nlegharị anya iji mee ka ụlọ ọrụ ahụ dịghachi ndụ. Anyị na-atụ aro ka Ministri nye ndị ọchụnta ego nwere ntụkwasị obi ego ka ha nwee ike ịlaghachi ebe anyị nọ tupu COVID-19; laghachite ndi-ayi n'ọlu; na-elekọta ụlọ, ogige ụlọikwuu, ụgbọ ala; ma na-akwado draịva na-egbochi ịkpa anụ, ka anyị na-agbake nwayọọ nwayọọ," ka ọ kọwara.
"Anyị ga-alaghachi azụ ahịa ọzọ, a ga-akwụghachikwa mbinye ego IMF a site n'aka anyị ma ọ bụ site n'aka ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị. A ghaghị ịgbanye mbinye ego ahụ n'ime azụmahịa iji nweta uru, mepụta ọrụ, na ịkwụ ụtụ isi," Mr. Chambulo kwuru.
Dị ka ngalaba njem nlegharị anya na-eji nwayọọ nwayọọ na-abanye na ọnọdụ mgbake na ụwa ndị ọzọ, akụkọ kachasị ọhụrụ nke ụlọ akụ ụwa na-agba ndị ọchịchị ume ka ha leba anya na nkwụghachi azụ ya n'ọdịnihu site n'ịkọba ihe ịma aka ndị na-adịte aka nke nwere ike inye aka mee ka Tanzania guzosie ike na ọnọdụ uto dị elu na nke gụnyere.
Mmelite akụ na ụba mba ụwa Tanzania kacha ọhụrụ, mgbanwe njem nlegharị anya: Maka ngalaba na-adịgide adịgide, nke na-adịgide adịgide na nke gụnyere, na-akọwapụta njem nlegharị anya dị ka isi na akụ na ụba mba, ibi ndụ, na mbelata ịda ogbenye, ọkachasị maka ụmụ nwanyị mejupụtara pasent 72 nke ndị ọrụ niile na njem nlegharị anya. sub-ngalaba.
Ngwụcha egwuregwu ekwu, sị:
November 13, 2021 na 18: 00
IMF enyerebeghị otu mba dara ogbenye aka. Ọ bụ ngwá ọrụ nke mba ndị bara ọgaranya ji kụda mba ndị dara ogbenye. Dị ka mba dara ogbenye, Tanzania ga-adaba n'isi ugbu a.
Ego mgbazinye Hemp Real Estate ekwu, sị:
November 2, 2021 na 08: 14
Tụlee ịhazi afọ oghere gị iji zere oge njem nlegharị anya dị elu iji chekwaa ego na ebe obibi, njem na ihe omume. Otu onye na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'ụwa, ka ọ dị ka United. Ọ bụ ezie na Japan adịbeghị njikere ịnabata ndị njem nlegharị anya si mba ọzọ, atụmanya na-emesịa na-achọ ebuka metụtara njem mba ahụ nwere nsogbu.